LGBTQ शान महिना | USAHello | USAHello
LGBTQ शान महिना
जुन लेसबियन छ, समलैंगिक, bisexual, Transgender, र Queer (LGBTQ) संयुक्त राज्य अमेरिका मा गर्व महिना. सम्पूर्ण महिना LGBTQ मान्छे र अरूलाई मनाउन को लागि एक समय छ, आफ्नो इतिहास आदर, र आफ्नो समुदाय समर्थन.
IStock / वृत्त रचनात्मक स्टूडियो
शान महिना मनाउन, समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका भरि गर्व parades र घटनाहरू संगठित. घटना सबै भिन्न छन्, तर ती सबै सम्मान र समर्थन LGBT मानिसहरूलाई गर्दै छन्. त्यहाँ parades छन्, पिकनिकको, दलहरू, कार्यशालाओं, संगीत, र अधिक. सहभागीहरू अक्सर रंगीन वस्त्र लगाउने, र केही लहर LGBTQ झण्डा.
गर्व महिना सम्झना गर्न मनाउन तर पनि एउटा समय छ. nighttime जमघट मा, मान्छे मोमबत्ती पकड र भाषण सुन्न. तिनीहरूले किनभने एन्टि-LGBTQ हिंसा वा एड्स को मृत्यु भएका LGBTQ मान्छे को सम्झना.
गर्व महीना पछि सुरु 1969 मैनहट्टन मा Stonewall दंगे, न्यूयोर्क. को Stonewall दंगे LGBTQ मान्छे विरुद्ध प्रहरी हिंसा जवाफ थियो. तिनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका मा गे लिबरेशन आन्दोलन सुरु रूपमा देख्न. प्रहरीले Stonewall Inn घुसे, एक लोकप्रिय LGBTQ पट्टी. तिनीहरूले विपरीत सेक्स को लुगा मा तैयार थिए मानिसहरू पक्राउ. समुदायको विरोध र दंगे साथ जवाफ. को दंगे transgender महिला नेतृत्व र तीन दिन लामो थियो. सबैभन्दा ट्रान्स नेताहरूको प्रसिद्ध नाम थिए Marsha पी. जनसन र सिल्भियाको Rivera. ती दंगे शान्तिपूर्ण थिएनन् तर आज शान्तिपूर्ण शान parades प्रेरित.
बराबर अधिकार को लागि लड
अमेरिकामा, LGBTQ मान्छे सबै राज्य अमेरिका मा बराबर अधिकार छैन. LGBTQ जोडे सधैं गैर-LGBTQ जोडे सँगै गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू के अनुमति छैन. कहिले काँही उनि एक घर भाडामा गर्न सक्षम छन्, एक बच्चा अपनाउने, बैंक ऋण को लागि लागू, वा प्रत्येक अन्य भ्रमण “परिवार” एक अस्पताल को खण्ड. Transgender मानिसहरू अक्सर रही स्वास्थ्य अवरुद्ध गर्दै, लागि जब लागू, वा सैन्य सामेल. धेरै वर्षको लागि, लेसबियन र समलिङ्गी मान्छे सबै राज्य अमेरिका मा विवाह गर्न अनुमति छैन थिए. केही भन्छ मान्छे विवाह गर्न अनुमति दिन व्यवस्था पारित तर पछि अधिकार टाढा लिए. मा 2015, सर्वोच्च अदालतले मान्छे सबै विवाह गर्न अनुमति 50 राज्यहरु. यो एक गर्व थियो, ऐतिहासिक दिन. यो LGBTQ समुदाय आफ्नो अधिकार को लागि लड्न छैन भने छैन भयो होला.
1980 को दशक र 1990 मा, LGBTQ हजारौं एचआईवी / एड्स महामारी प्रभावित थिए. तिनीहरूलाई धेरै समलिङ्गी पुरुष र transgender महिला थिए. एचआईभी प्रतिरक्षा प्रणाली असर गर्ने एक भाइरस छ. उपचार बिना, यसलाई एड्स हुन्छ. मान्छे पहिलो एचआईभी संक्रमित हुँदा, वैज्ञानिकहरू र डाक्टर रोग बुझेनन्. कुनै उपचार वा उपचार थियो किनभने धेरै मानिसहरू मरे. किनभने सरकार अनुसन्धान गरिरहेको थिएन LGBTQ मान्छे protested. कार्यकर्ता को एक ठूलो समूह, अधिनियम बोलाइन्, संगठित सार्वजनिक “को-इन्स।” यी घटनाहरू मा, मान्छे संकट मान्छे प्रभावित भएको थियो कसरी देखाउन जमीनमा झूठ थियो. मा 1987, हजारौं एक रजाई सिर्जना र वाशिंगटन मा प्रदर्शित, डीसी, एड्स को मृत्यु भएको थियो गर्नेहरूलाई सम्झना गर्न. को LGBTQ समुदाय मान्छे यस रोग सिक्न मदत. ती किनभने, थप चिकित्सा अनुसन्धान उपायहरु र उपचार पाउन गरेको छ.
शान महिना समयमा, धेरै समूह, संगठन, र समुदाय शान झण्डा प्रदर्शन गरेर LGBTQ समुदाय लागि समर्थन. को शान झण्डा स्यान फ्रान्सिस्को मा डिजाइन भएको थियो 1978 कलाकार गिल्बर्ट बेकर द्वारा. यो समुदायमा लिङ्ग र यौन झुकाव को विविधता प्रतिनिधित्व गर्ने एक इन्द्रेणी झण्डा छ.
त्यहाँ LGBTQ समुदाय भित्र समूह अन्य झण्डा हो. त्यहाँ transgender मान्छे समर्थन गर्न छुट्टै transgender झण्डा छ, जो विभिन्न संघर्ष सामना. Transgender मान्छे थप हिंसा र भेदभाव सामना, र तिनीहरूले अन्य समूह भन्दा बढी आत्महत्या प्रतिबद्ध. तिनीहरूले कम अधिकार र अझै पनि स्वीकृति कि लेसबियन लागि लडिरहेका छन्, समलिङ्गी, बिसेकषिल, र Queer मान्छे छ. त्यहाँ transgender मान्छे ध्यान अलग घटनाहरू र parades छन्. नीलो धर्काहरू पुरुष लिङ्ग प्रतिनिधित्व र गुलाबी महिला लिङ्ग प्रतिनिधित्व. बीचमा सेतो धारी प्रतीक मान्छे एक लिङ्ग अर्को को संक्रमण भएकाहरू छ.
गर्व महिना बस संयुक्त राज्य अमेरिका मा ठाउँ लिन छैन. विश्व भरि, को LGBTQ मान्छे समुदाय सिर्जना गर्न काम गर्दै, अधिकार लागि लड्न, र अरूलाई शिक्षित. त्यहाँ संसारभरिका शान parades छन्. तिनीहरूले विभिन्न लाग्न सक्छ, तर सबै शान parades दृश्यात्मक प्रदान गरेर LGBTQ समुदाय समर्थन. यदि तपाईं LGBTQ समुदाय थाहा छैन वा LGBTQ समुदायमा मित्र फेला पार्न चाहनुहुन्छ, गर्व महिना सिक्न र मनाउन एक तरिका हो.
LGBT: लेसबियन, समलिङ्गी, बिसेकषिल, र transgender समुदाय